Maalinta: Juun 6, 2018
Wakiilka Midowga Afrika Naci Gaaskan oo booqasho ku tagay EOSB
Rector of Anadolu University Dr. Naci Gündoğan wuxuu booqday Nadir Küpeli, Gudoomiyaha Gudiga Eskişehir Organised Zone Zone (EOSB). Hambalyo Madaxweyne Küpeli guusha uu ka gaadhay doorashooyinka. Dr. Naci Gündoğan, [More ...]
Carruurta ku nool Deegaanku waxay baran doonaan sharciyada waddada iyadoo leh xiiso
Inta lagu jiro fasaxa xagaaga, Tababbarka Ballanta Gaadiidka ee Trafik ”ayaa bilaaban doonta Denizli Dawlada Hoose ee Magaalooyinka waxay carruurta ku bari doontaa qawaaniinta taraafikada fikradda iyo tababarka ficil ahaan. Denizli, oo fuliya daraasado iyada oo ujeedadu tahay abuurista wacyigelinta taraafikada da 'yarta [More ...]
Turgutlu'ya Bayram Gift
Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa ayaa laga hirgaliyay Wadada isku xirka Izmir-Ankara ee Turgutlu Storey Junction iyo Mashruuca Codsiga Waddo qeyb kamid ah wax soo saarka, waxay u furmeysaa taraafikada waqti gaaban kadib. Duqa Magaalada Turgutlu Turgay Şirin [More ...]
Waxaa la saxeexay heshiiska hirgalinta garoonka diyaaradaha İzmir Ekrem Pakdemirli Alaçatı, kaas oo lagu dhisi doono Muuqaalka Beddelka "O Ope Transfer Model", ayaa la saxeexay. Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha iyo Maareeyaha Guud Funda Ocak xafladda saxiixa oo lagu qabtay DHMİ Agaasimaha Guud, Qandaraaslaha [More ...]
Laf-dhabarka Tareenada Turki ee ku xiran labada Qeybood
Maritime Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaadhsiinta Ahmet Arslan, waddada tareenka bari-galbeed ee Turkiga waa laf weyn ee tareenada ee labada Asia labada Yurub Kars-Igdir-December Dilucu xiri doona shuqullada design waxbarasho on the line tareenka, sanad-dhamaadka ama [More ...]
Muwaadiniinta oo doonaya in ay habeenkii soo galaan IZBAN
Muwaadiniinta ku nool degmooyinka waqooyiga Izmir, yaZBAN'da safarka habeen-dhaxa, ayaa sheegay inaysan keenin wax cabasho ah. Gaar ahaan kuwa ay tahay inay qabsadaan diyaaradda subaxdii oo duulaya diyaaradda habeenka ka dambeeya 24: [More ...]
Wadayaasha tijaabada ah waxay kusii socdaan qaybta 'Yamanevler-Mines' ee metsküdar-Sancaktepe metro line, kaasoo u adeega wadada tareenka ugu horeysa ee aan duuliyaha laheyn ee Istanbul kuna soo laabata sheekada masaska ee taariikhda dhameystirka masraxa oo dhan. Sida laga soo xigtay maalinlaha Zeynel Yaman, [More ...]
Mid ka mid ah shanta shirkadood ee 'IGA', oo loo aasaasay in lagu dhiso garoonka saddexaad ee magaalada Istanbul iyo inuu ku shaqeeyo sanadka 25, shaqaalaha shirkadda CAI, oo ah qandaraasle hoosaad ka ah shirkadda Kalyon, ayaan awoodin inay helaan mushaarkooda muddo laba bilood ah. [More ...]
Kooxda Ammaanka ee Garoonka diyaaradaha cusub ee Istanbul ayaa bilaabay Tababarka
Ilaalada amniga ee ka shaqeyn doonta garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee cusub (INA), oo fursado shaqo siin doona 225 oo qof, ayaa bilaabay tababar. Shaqaalaha amniga ee ay doorteen İGA, oo qabta shaqada iyo howlaha garoonka cusub 25 sano, [More ...]
Goorma Sabiha Gökçen Kurtköy Subway furan tahay? : Dhamaadka 6 sano ee Sabiha Gökçen Kurtköy metro line oo ka koobnaan doona Sabiha Gökçen Airport, Teknopark, Yenişehir iyo Kurtköy. [More ...]
100 Meter Solution-ga Sol Station Station ee Etimesgut
Qoyska 68 ee ku nool dhismooyinka lagu dumin doono inta ay gaarsiisan tahay ballaarinta Istasyon Street waxaa loo rari doonaa guryaha cusub ee ay dhisi doonto Metropolitan guryahooda 100 mitir dhulka cusub ee laga dhisi doono Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara. [More ...]
Guddoomiye Ku Xigeenka, TÜLOMSAŞ ayaa booqday aagga bandhigga
Guddoomiyaha Eskisehir Ozdemir Cakacak, TÜLOMSAŞ aruurinta alaabooyinka qurxinta ee ku wareegaya goobta bandhigga, maamulaha guud ee TÜLOMSAŞ Hayri Avcı'dan ayaa helay macluumaadka. Sidii magaalo tareen oo leh soo-gelinta TÜLOMSAŞ iyo agabyada sharraxaya wixii tagay iyo kan hadda jira [More ...]
Halkan Giant Project dalka Turkiga
100 ee Jamhuuriyadda. sano in waqti yar, dhowr mashruuc weyn oo soo socda inuu nolosha Turkey. Hawlahan qaarkood ayaa la dhammaystiray qaarkoodna waxay ku socdaan horumar. Rafaa gaadiidka dalka Turkiga sanadihii la soo dhaafay [More ...]